SomTV-Seattle » Blog Archive » Hay’adda HARO oo gargaar ay ku deeqay Ururka WAMY u qaybisay barakacyaal ku nool Magaalada Muqdisho
Hay’adda HARO oo gargaar ay ku deeqay Ururka WAMY u qaybisay barakacyaal ku nool Magaalada Muqdisho
Isniin, December 12, 2011 (HOL) − Hay’adda Huminaterian African Relief Organization (HARO) oo kaashanaysa ururka World Assambly of Muslim Youth (WAMY) ayaa waxay gargaar bani’aadamnimo ugu qaybisay Muqdisho 550-qoys oo ka mid ah kuwii kasoo barakacay gobollada Koonfureed ee Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta hay’adda HARO ayaa sheegay in gargaarkan oo ahaa raashin qalalan ay u qaybiyeen barakacayaal ku jira kaakam ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, iyagoo sheegay in qoys walba ay siiyeen raashin ay ugu talogaleen inuu ku noolaado toddobaadyo.
“Qoysaska aan gargaarka u qaybinnay waxay ka koobnaayeen 550-qoys, waxaana la siiyay qoys walba kartoon ay ku jiraan 10-kg oo bur, 10-kg oo bariis, 5-kg oo sokor ah, 2500-kg oo caano boore ah iyo laba caag oo saliid ah,” ayay saxaafadda u sheegeen mas’uuliyiinta hay’adda HARO .
Haween ka mid ah kuwii ka faa’iideystay gargaarkan ayaa waxay sheegeen inaysan helin bilahan wax gargaar ah, ayna markii hore ahaayeen dadkii kasoo barakacay gobollada Koonfurta Soomaaliya oo ay ku dhufteen abaarihii ugu xumaa muddo 60-sano ah.
Dadka gargaarka loo qaybiyay oo u badnaa haween ayaa waxaa jirkooda ka muuqday isbedel weyn oo ku dhacay tan iyo markii ay Muqdisho yimaadeen iyagoo ay ka muuqato macluul daran, waana haweenka qaarkood ay u muuqdeen kuwo jirkoodu soo laabtay.
“Waxaan qorsheynaynaa inaan dhawaan gargaarro kuwan oo kale ah ka qaybinno kaamamka Muqdisho ku yaalla qaarkood, waxaana howshaas la kaashan doonnaa ururka WAMY,” ayay mar kale warbaahinta u sheegeen mas’uuliyiintu HARO.
Hay’adda HARO oo gargaarkan u qaybisay dadka barakacayaasha ah ayaa waxay horay gargaarro noocan oo kale ah uga soo qaybisay gobollada Bay, Bakool, Hiiraan iyo Jubbooyinka.
Ma’suuliyiinta hay’adda ayaa intaa ku daray inay xiriir la leeyihiin hay’adaha gargaarka ee ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya, iyagoo sheegay in howlaha gargaraka kusoo jireen muddo sannooyin ah.
Number Of Reads 764
comments: Comments Off on Hay’adda HARO oo gargaar ay ku deeqay Ururka WAMY u qaybisay barakacyaal ku nool Magaalada Muqdisho
« 25 former Hertz drivers in Seattle sue, saying they were targeted as Somali Muslims Somali TV of Minnesota »